Ivai Vakavimbika Kune Mumwe Nemumwe | Mhuri Inofara
Kushandisa Kwamungaita Mari Zvakanaka
Mutauro Wemasaini wechiCzech
Mutauro Wemasaini wechiPortuguese
Mutauro Wemasaini wokuAngola
Mutauro Wemasaini wokuGhana
Mutauro Wemasaini wokuIndia
Mutauro Wemasaini wokuMadagascar
Mutauro Wemasaini wokuSlovakia
Mutauro Wemasaini wokuSweden
Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe
“Ngaparege kuva nomunhu anoparadzanisa zvasungwa pamwe chete pajoko naMwari.”—Mako 10:9
Jehovha anoda kuti tikoshese kuvimbika. (Pisarema 18:25) Izvi zvinonyanya kukosha muwanano yenyu nokuti pasina kuvimbika, hapana kuvimbana. Uye kuvimbana kunokosha pakuita kuti rudo ruwedzere.
Mazuva ano, pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti vanhu vatadze kuvimbika muwanano. Kuti uchengetedze wanano yenyu, pane zvinhu zviviri zvaunofanira kutsunga kuita.
1 KOSHESA WANANO YENYU ZVIKURU
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Muve nechokwadi chokuti zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe ndezvipi.” (VaFiripi 1:10) Wanano yenyu ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha muupenyu hwako. Inofanira kukosheswa zvikuru.
Jehovha anoda kuti ufunge nezvemumwe wako uye anoda kuti ‘mufadzwe noupenyu’ pamwe chete. (Muparidzi 9:9) Anojekesa kuti haufaniri kumboregeredza mumwe wako, asi mose munofanira kutsvaka nzira dzekuita kuti mufadzane. (1 VaKorinde 10:24) Ita kuti mumwe wako anzwe achikosheswa.
Iva nechokwadi chokuti munogara muchiva nenguva yekuva pamwe chete, nguva yekufunga nezvemumwe wako chete
Funga uchiti “isu” pane kuti “ini”
2 CHENGETEDZA MWOYO WAKO
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu wose anoramba akatarira mukadzi zvokuti anomuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.” (Mateu 5:28) Kana munhu akaramba achifunga zvinhu zveunzenza, ikoko kunenge kuri kusatendeseka kune mumwe wake.
Jehovha anoti unofanira ku“chengetedza mwoyo wako.” (Zvirevo 4:23; Jeremiya 17:9) Kuti udaro, unofanira kuchengetedza maziso ako. (Mateu 5:29, 30) Tevedzera muenzaniso waJobho, uyo akaita sungano nemaziso ake kuti asambotarisa mumwe mukadzi achimuchiva. (Jobho 31:1) Ita chitsidzo chokuti usatomboona zvinonyadzisira. Uye tsunga kudzivisa kutorwa mwoyo nemumwe munhu asiri wawakaroorana naye.
Ita kuti zvive pachena kune vamwe kuti wakazvipira zvizere kune mumwe wako
Iva nehanya nemanzwiro emumwe wako, uye kurumidza kugura ushamwari chero hupi hungaita kuti mumwe wako asanzwa zvakanaka
ITA ZVAUNOFANIRA KUITA
Zvione sezvauri chaizvo, uye ziva pausina kusimba. (Pisarema 15:2) Usanyara kukumbira kubatsirwa. (Zvirevo 1:5) Kana uchifunga zveunzenza ramba uchirwisa mafungiro iwayo. Usakanda mapfumo pasi. (Zvirevo 24:16) Jehovha achakomborera zvaunoita kuti urambe wakavimbika kune mumwe wako.
Ndingaita sei kuti ndiwane nguva yekuva nemumwe wangu?
Mumwe wangu ndiye shamwari yangu yepamwoyo here?